(ဦးဘခင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
တက္ကသိုလ် ဆက်မတက်ဘဲ ငွေစာရင်းမင်းကြီးရုံး၌ အောက်တန်းစာရေးအဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်သည်။ ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ စာရင်းကိုင်စာမေးပွဲအောင်မြင်၍ ဝန်ထောက်ရာထူး တိုးမြှင့်ခံရပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ငွေစာရင်းမင်းကြီးဖြစ်လာသည်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် သရေစည်သူ ဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခံရပါသည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားယူခဲ့သော်လည်း ထိုနှစ်မှာပင် နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး အထူးအရာရှိအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပါသည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် အစိုးရတာဝန် အားလုံးမှ အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် အင်းလျားမြိုင်လမ်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပဋိပတ္တိလုပ်ငန်းဌာနတွင် ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားပြလုပ်ငန်းကို ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ဆောင်ရွက်သွားခဲ့သည်။
အာရှ၊ ဥရောပ၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန်၊ ဩစတြေးလျစသည့် နိုင်ငံ များ၌ ဓမ္မရိပ်သာခွဲများ တည်ဆောက်၍ ဗုဒ္ဓ သာသနာ ပြန့်ပွားရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉-၁-၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ၌ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီး၏ ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း တရား အားထုတ်သူများထဲမှ ဆရာကြီး ဂိုအင်ကာ သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဓမ္မဂီရိ ဝိပဿနာအဖွဲ့တရားရိပ်သာ ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားရန် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ 
↑ သန်းထွန်း, (မော်လမြိုင်) (၂၀၁၀ ခုနှစ်). မြန်မာနိုင်ငံ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များသမိုင်း, စာပေဗိမာန်ထုတ်ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်. စာပေဗိမာန် စာတည်းမှူးချုပ်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘခင်&oldid=448619" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၃:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။